Ogwe kachasị mma na Buenos Aires | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Buenos Aires, Atụmatụ
Buenos Aires ọ bụ otu n’ime obodo ndị kachasị nwee udo na Latin America. Ọ bụ obodo ọdịbendị, nke nwere ọtụtụ sinima, nnukwu ebe nkiri, ahịa, ngosipụta dị iche iche na a ndụ abalị na-enweghị atụ, nke na-amalite n’abalị ma kwụsị mgbe anyanwụ wara.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe dị ọnụ ala, Buenos Aires bụ obodo maara etu esi ekpori ndụ ma na-enye ihe dị iche kwa abalị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso ndị Argentine na-emekọrịta ihe, ụlọ mmanya bụ ebe kachasị mma, yabụ ọ bụrụ na isi obodo South America a dị na ụzọ gị, dee aha ha. Ogwe dị jụụ na Bs. Ikekwe ị maara ịhụnanya n'ime ha.
1 Ogwe nke Buenos Aires
3 Ogwe Naples
5 Ogwe Ugbo
Ogwe nke Buenos Aires
Buenos Aires nke abalị na-ama ama. Amalite mbubreyo wee kwụsị mgbe chi bọrọ ma ọ bụ mgbe anyanwụ na-awa ya mere ọ bụrụ na ị ga-anọ ọdụ n'oge ị ga-anọ na ihendori gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ... mgbe ahụ ka iteta! N'oge a, otu n'ime ebe kachasị mma ị ga-apụ bụ mpaghara Palermo, mana njem abalị nke ọma ga-agụnye n'akụkụ ndị ọzọ nke Buenos Aires, ee ma ọ bụ ee.
Palermo Ọ na-adịbu ebe obibi dị jụụ, nke nwere naanị ụlọ abụọ ma ọ bụ atọ, nwere oke osisi na na mpụga etiti ahụ. Ọ bụ isiokwu nke mgbanwe obodo mepere emepe ihe dị ka afọ iri abụọ gara aga na ụlọ ochie gbanwere gaa n'ụlọ nri, ụlọ ahịa, ebe obibi, ụlọ mmanya na ọbụlagodi telivishọn na ụlọ ọrụ mmepụta. Obi nke ndi ntorobia n'ime afo ole na ole na ihe kwesiri ndi njem nleta. Ma ehihie na abalị.
Enwere ogwe dị iche iche, yana a style nke ahụ na-eme ha pụrụ iche na ọ bụ ya mere ha ji dị na ndepụta a.
Ọ pụrụ iche n'ihi na ọ dị ka ọdụ ụgbọ oloko New York. N'èzí, ọ naghị adọta uche, naanị ọnụ ụzọ na steepụ nke na-agbada n'ala (ọ bụ ezie na ị ga-ebu ụzọ debe onye ahụ na-ahụ maka ụzọ na ndepụta ndenye iwu ya)
Ọ bụrụ na ịmara New York mgbe ahụ ị ga-ahụ myirịta: taịl nile, akara aka, ntụgharị ndị na-ahazi ụzọ, ụgbọ ala, ọwara, ikpo okwu. Ọbụna mgbe ị banyere n'etiti ndị mmadụ, were nkeji ole na ole were foto dịka o kwesịrị ncheta. Na n'azụ ụzọ ọzọ bụ mmanya dị ka ụzọ ụgbọ oloko New York, n'agbanyeghị na ọ ga-adịkwu okomoko.
Iji Uptown ị nwere ike ịga rie ma drinkụọ. Ma eleghị anya, ndị mmadụ na-eri nri n’ebe ọzọ na-a hereụ ihe ọ afterụ drinkụ mgbe elekere iri na otu nke abalị gachara. Enwere abụọ ndị bartender ndị na-emepụta ihe ọ theụ theụ na onye siri nri onye mepụtara menu ahaziri dịka agbata obi nke ugwu ugwu. Ihe ọ Dụụ na-aba n'anya bụ ihe dị ka pesos 160 Argentine (euro 10)Beer dị ọnụ ala karịa ya na iko mmanya dị. N’ụzọ doro anya, otu iko nke Malbec nke Argentine ga-enye iwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ mmanya mmanya oge ochie, gbaa mbọ nwaa mpaghara ndị a.
Uptown dị na Calle Arévalo 2030, na Palermo. Nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ ịde akwụkwọ tupu oge eruo: uptownba.com. Ọ na-emepe site na Tuesday ruo Fraịdee site na 20: 30 pm ka ọ na-emechi.
Ogwe a dị na mpaghara ndị ọzọ na-eme njem nlegharị anya na njem nlegharị anya nke Buenos Aires: San Telmo. Ọ bụ obodo nke akụkọ ihe mere eme ma nwee ndụ abalị ọ bụla n'agbanyeghị na ị ga-akpachara anya n'ihi na n'abalị, mpaghara ahụ dịtụ ize ndụ.
Ogwe na-arụ ọrụ n'ụlọ onye na-ere ahịa oge ochie (Antilọ ndị mgbe ochie na-ewu ewu n'akụkụ a nke obodo), yabụ n'etiti tebụl bụ arịa ụlọ mgbe ochie na ihe dị iche iche, agba na afọ. Carsgbọ ala na-enwu, na ụgbọala ochie,, ebe ọ bụ na onye nwe ya nwere nnukwu nchịkọta nwere ihe karịrị 70 ụgbọ ala kpochapụwo na ihe karịrị 50 ọgba tum tum. Echiche Onye Okike bụ ka agwakota ya jụụ na kwa ụbọchị na nke a bụ ebe ị ga-esoro ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi gị.
N'ime oghere a, ebe a na-adọba ụgbọala nke otu nwoke bara ọgaranya Buenos Aires nke dị na ya site na mmalite nke narị afọ na mgbe emezigharị oghere dị ugbu a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2000 square mita, mix mmanya, ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ihe ochie shop. The cocktails bụ ndị ochie na, doro anya, e nwere ọtụtụ ndị Italian na na aha nke mafia ezinụlọ, na-eme ka ha oyi. Emeela menu ihe ọ drinksụ drinksụ site na nkwanye ugwu bartender ya mere ọ nweghị ihe etinyere.
Mmanya, biya, mmanya, ọgwụ mgbochi, salads, azụ, pizzas na pasta. Ogwe Naples dị na Avenida Caseros 449, na San Telmo ma mepee site na Tuesday ruo Saturday site na 9 ruo etiti abalị na Sọnde site na 10 ruo 5 elekere.
Ogwe nkecha ọzọ. Ọ bụrụ n'ịchọ ntọala, ebe a na-adịghị ahụkebe na ụkpụrụ ụlọ, mmanya a kwesịrị ịnọ n'okporo ụzọ. Ọ bụ mmanya na Palermo Yabụ Ogwe niile dị na mpaghara a ị nwere ike izute n'otu abalị ahụ, ọ bụrụ na ịnwee mmụọ nke nnọkọ.
Apothecary O nwere ikuku nke ụlọ ahịa ọgwụ ochie n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ochie nke ụlọ ahịa ọgwụ Palermo nke rụọ ọrụ na 30s. Emegharịrị, onye abanye na ahịa ọgwụ-mmanya ọ na-adịkwa ka mgbe ahụ.
Akwụkwọ ozi ahụ nwere ụdị ejiji kemgbe a na-atụgharị mmanya ndị a na-esi na botani Yabụ enwere mmanya na ọgwụ ọgwụ ma ọ bụ ume ọhụrụ, na-atọ ụtọ, ifuru, na nkenke, ọbụlagodi mmanya mmanya nwere mbinye aka ọzọ. Nwere ike ịtụ vodka na ihe ngosi nke rosehip tii na oroma peels, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ gin na rosemary, ma ọ bụrụ na ị nwere ọgụgụ isi ị nwere ike ịme ihe ọ drinkụ yourụ nke gị na ihe abụọ ha na-enye gị.
Apothecary na-arụ ọrụ n'ụlọ elu abụọ na etiti o nwere patio na-atọkarị ụtọ n'oge ọkọchị. Egwú egwu na-ada ma ọ bụ ebe na-aghọ ezigbo mmekọrịta. Ọ na-emepe Tuesday site na Tọzdee site na 5 pm ruo 2 nke ụtụtụ na Friday na Saturday site na 8 pm ruo 4 pm. Ọ bụ n'okporo ámá Honduras 5207, na Palermo. Iji lee anya ị nwere ike ịga na weebụsaịtị, boticariobar.com.
Ogwe ọzọ na Palermo. Mgbe ị nọ na Buenos Aires, ị ga-achọpụta etu o siri sie ike ịpụ na ndọta nke agbataobi a. Ọ bụrụ n ’ịga n’oge ọkọchị ị gaghị achọ ịkwaga nke ukwuu n’ihi na ebe a ka e nwere ọtụtụ osisi, ụzọ sara mbara na mbara ala iji gbochie okpomọkụ ahụ. San Telmo, n'aka nke ọzọ, nwere ihe ndị ọzọ.
Ogwe Ugbo ọ bụ nchikota nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na osisi na-enyefe freshness na dị nnọọ mma. O nwere ogwe osisi sara mbara, oche oche na osisi n'ebe nile: n’ala, n’elu mgbidi na n’elu ụlọ. Ọ bụ n'ezie ezigbo ebe dị mma nke na-ebunye ịhụnanya. Enwere ime ụlọ na-emeghe ọbụna n'oge oyi (Ha na-enye gị kootu dị ka mmanya ndị ọzọ dị n'ụwa), ma ị nwere ike ị drinkụ ihe ọ andụ andụ ma rie.
The menu nwere Gọọmet efere ma ihu ọma na ọ bụ dị mfe na-enye, na mba na obodo flavors. Ihe ọ Theụ drinkụ ihe ọ Theụ drinkụ, maka nke ya, nwere ndị ochie na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ha na-agwakọta mmanya na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi. Dịka ọmụmaatụ, vodka, mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, elderberry nectar, lemon na ọcha.
Nwere ike ịga na ibe Facebook ha ma ọ bụ ịgagharị: ọ bụ na Thames 1472 ma mepee Tuesday site na Tọzdee site na 8 pm ruo 2 am na Friday na Saturday site na 8 pm ruo 4am.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Buenos Aires » Ogwe kachasị mma na Buenos Aires
6 ịrịba ebe na-agba ọsọ a marathon